Kind met overgewicht Somalisch - Voorlichting Vertaald
033 - 2003259
Gratis account aanvragen
Kind met overgewicht Somalisch
Home Diëtist Kind met overgewicht Kind met overgewicht Somalisch
Ilmaha aadka ucayilan
Marka ilmahaagu dhigto dugsiga hoose, waxa si joogto ah u hubin doona dhakhtarka dugsiga, kaas oo u shaqeeya daryeelka caafimaadka dhalinyarada. Waxay la socdaan sida uu u korayo dhererka, laakiin sidoo kale miisaanka. Haddii ilmahaagu aad u culus yahay, daryeelka caafimaadka dhalinyarada ayaa ku ogeysiinaya tan.
Ilmaha aadka u cayilan waxa uu leeyahay fursad weyn oo uu hadhow ku bukoon karo, sidaa awgeed waa muhiim in wax laga qabto wakhti fiican.
2. Cabbirka iyo miisaanka Waalidiin badan ayaa si joogto ah u cabbira oo u miisaama carruurtooda, laakiin sidee ku ogaan kartaa in ilmahaagu miisaankiisu sarreeyo? Waxaad ku ogaan kartaa haddii ilmahaagu leeyahay miisaan caafimaad qaba oo lagu sameeyo baadhis fudud: Body Mass Index (BMI). Imtixaankan waxaa sameeya dhakhtarka dugsiga, adiguna waxaad ku samayn kartaa guriga adigoo isticmaalaya bogga internetka www.voedingscentrum.nl/nl/bmi-meter
3. Carruurta cunto Ma wanaagsana inaad u ogolaato cunugaada inuu wax cuno caawimaad la'aan. Dhammaanba, carruurtu waxay u baahan yihiin dhammaan nafaqooyinka ay u baahan yihiin si ay si wanaagsan u koraan. Sidaa darteed, weydii dhakhtarkaaga qoyska, kalkaalisada dhalinyarada ama dhakhtarka dugsiga talo. Haddii loo baahdo, waxay u gudbin karaan ilmahaaga bixiyaha daryeelka saxda ah si ay u caawiyaan, sida dhakhtarka carruurta ama dhakhtarka carruurta. Haddii aad qabto wax shaki ah ama su'aalo ah oo ku saabsan miisaanka ilmahaaga, waxaad mar walba la tashan kartaa GP-gaaga ama kalkaalisada dhalinyarada/dhakhtarka dugsiga.
4. Sabab Had iyo jeer ma cadda sababta uu ilmuhu u noqday mid buuran. Waxaa laga yaabaa in isaga/iyada ay cunaan ama cabbaan waxyaabo aadan ogeyn inay ku jiraan kalooriyo badan. Badanaa, sidoo kale waa su'aal ah in la cuno qaybo aad u badan.
• Wax ku cun miiska oo ha hor marin TV-ga ama kombiyuutarka. Carruurta (iyo dadka waaweyn) waxay wax ka cunaan miiska wax ka yar marka loo eego TV-ga hortiisa ama kombiyuutarka.
5. Ha u ogolaan ilmahaagu inuu keligiis gaadho macmacaanka guriga. Halkii miiska saar midho.
• Fiiri cuntooyinka fudud: maxay ka kooban yihiin marka loo eego sonkorta, baruurta iyo kalooriyooyinka? Waxaad tan si fiican ugu arki kartaa summada badeecadda. Alaabooyin badan oo u muuqda kuwo caafimaad qaba maaha. "Iyadoo aan sonkor lagu darin" macnaheedu maaha in aanay sonkor ku jirin. Jeex buskud sinjibiil ah ama buskud khudaar ah ayaa u ekaan karta mid ku habboon carruurta, laakiin waa keeg keliya oo leh kalooriyo badan.
• Hubi in ilmahaagu aanu aad u cabbin cabitaannada fudud, baakadaha cabitaannada ama cabitaanka furuutka. Cabitaanadan waxaa ku jira sonkor badan.
• Qaybaha ilmahaagu cuno ma ku habboon yihiin isaga/iyada? Cunuggu wuxuu u baahan yahay hal qayb oo cunto ah cuntadiiba mana cuno wax badan sida qof weyn.
QR Code naar deze pagina:
Voorlichting Vertaald © 2022 Alle rechten voorbehouden | KvK 83363440 | Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer
Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op de website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies